Shina: Napetraka ny Blue Dam (rindrambaiko fanivanana sy fanarahamaso) · Global Voices teny Malagasy
Shina: Napetraka ny Blue Dam (rindrambaiko fanivanana sy fanarahamaso)
Voadika ny 01 Febroary 2019 4:57 GMT
Vao haingana ny governemanta ao Beijing no nangataka tamin'ireo mpamatsy tolotra aterineto sy foiben'ny angon-drakitra mba hametraka rindrambaiko antsoina hoe Blue Dam any amin'ny lohamilina rehetra. Araka ny filazan'ny Taiwan Apple Daily News, tokony hanomboka handeha androany (13 septambra 2009) ny Blue Dam raha tsy izany hiharan'ny sazy ireo orinasa.
Azo trohana ato ny rindrambaiko Blue Dam. Ny orinasa momba ny Teknolojia Fiarovam-baovao Shanghai Andatong no namorona ny Blue Dam ary araka ny tatitra iray tamin'ny volana jolay 2009, in-20 avo heny mahomby kokoa ny Blue Dam (tohodrano manga) raha oharina amin'ny Green Dam (tohodrano maitso) satria fitambarana rindrambaiko sy rindrambainga izy.
Ahitana ireto endri-javatra ireto ny rafitry ny Blue Dam: rafitra fanivanana sary, rafitra fitantanana, mpitantana ny fitondrantena amin'ny aterineto, mpanjifa VPN. Nilaza ilay mpandrafitra an-tsolosaina (developera) fa ny endrika ara-barotra nataon'ny orinasa tamin'ny Blue Dam dia afaka manampy ny orinasa hanakana ny mpiasany tsy hitsidika tranonkala na hiresadresaka ao amin'ny aterineto amin'ny zavatra tsy misy ifandraisany amin'ny asa.
Tamin'ny volana jona, dia nitaky tamin'ireo mpanamboatra solosaina iraisam-pirenena ny governemanta ao Beijing mba hametraka rindrambaiko fanivanana antsoina hoe “Green Dam-Youth Escort” amin'ny solosainan'izy ireo tonga amin'ny sambo ao Shina manomboka ny 1 Jolay. Nialàna ny drafitra tamin'ny farany satria nanohitra mafy ilay fitaovam-panivanana ny fanehoan-kevitry ny vahoaka tamin'ny aterineto.
Satria napetraka ao amin'ny sehatry ny mpanome tolotra aterineto tsy misy fifanakalozan-kevitra malalaka ny Blue Dam ankehitriny. Dia iharan'ny sivana sy fanaraha-maso fitondrantena antserasera ny mpiserasera amin'ny aterineto manana fahatsapan-tena kely.